Khuphela imifanekiso yamaphephadonga ye-OnePlus 6 | I-Androidsis
Khuphela imifanekiso yamaphephadonga ye-OnePlus 6 entsha
Kwiintsuku ezimbalwa, inkampani ye-OnePlus yenze ukuba ifumaneke kuthi OnePlus 6, eyona modeli yamva nje yenkampani isizisa njengeyona nto iphambili kubuhle bayo, yeyona nto ibalaseleyo, inotshi ephezulu kwesikrini, ububi obuyimfuneko ekuya kufuneka siqhele kubo, ewe okanye ewe.
Njengazo zonke iziphelo ezitsha ezifika kwimarike, i-OnePlus 6 yenza njalo ngothotho lwamaphephadonga yenzelwe ukuqaqambisa amanqaku esikrini sesiphelo. Ukuba imifanekiso yamaphephadonga emitsha ebonelelwe yile modeli ikubambile, siya kukubonisa ukuba singayikhuphela njani kwisiphelo sakho.
Yonke imifanekiso yamaphephadonga iya kufumaneka ifumaneka kwisisombululo se-2k, nangona ngewebhusayithi yombhali wayo, Hampus OlssonSinokuzikhuphelela kwisisombululo se-4k, ukuba siceba ukuyisebenzisa kwikhompyuter yethu ngesuphavayiza ehambelanayo. U-Olsson ubanga ukuba uphefumlelwe yi-OnePlus 2 yamaphephadonga ukwenza i-OnePlus 6 yamaphephadonga amatsha, nangona amatsha eqaqambile kwaye ethe tyaba.
U-Olsson kwafuneka enze uyilo lokubonisa umboniso ngaphandle kwe-bezel, ngaphandle kokungenelela kwiimpawu kwiscreen sasekhaya, enye yeemfuno zenkampani xa eyalelwa ukuba ayile amaphephadonga. Kuyamangalisa ngakumbi ukuba kwesi sihlandlo, umbhali wamaphephadonga uzazisile, kuba kwiimeko ezininzi, ngakumbi xa imvelaphi ingabonakali, olo lwazi alunikwa.
I-OnePlus 6 ilapha ukuze ihlale kwaye ibe yiyo kwakhona Isalathiso kwimakethi ephezulu yokuthengisa umnxeba ngamaxabiso asezantsi, okoko nje Hlonipha i10Isiphelo sendlela emva kosuku emva kokuba kuthengisiwe kuthengisiwe kuyo yonke iYurophu. Esi siginali sisinika, ngokusebenzayo, iimpawu ezifanayo neHuawei P20 kodwa nge-300 euro engaphantsi.
Uyazithanda izilwanyana? Ungaphoswa zezi imvelaphi yezilwanyana yeselula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Khuphela imifanekiso yamaphephadonga ye-OnePlus 6 entsha
I-OnePlus 6 ifumana olona vavanyo ludumileyo lokunyamezela
Ungasifaka njani isidlali somculo seHuawei P20 kuyo nayiphi na i-Android